နိုင်ငံသန့်ရှင်းစေလိုရင် ဝေဖန်ပေးကြစေလိုပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » နိုင်ငံသန့်ရှင်းစေလိုရင် ဝေဖန်ပေးကြစေလိုပါတယ်
Posted by Rose Minn on Feb 11, 2012 in Health & Fitness |9comments
ခေတ်မှီတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့လူတိုင်း သွားချင် ကြတယ်ပေါ့။ ဒါဆိုရင် ဒီပို့စ်နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး မသိသေးတဲ့သူတွေ သိရအောင်သိပြီးသားလူတွေလဲ ဝေဖန်ပေးကြစေချင်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်လား မဖြစ်သင့်လားပေါ့။ အခုချိန်မှာ ရန်ကုန် မြို့တစ်ခုထဲဆိုပေမယ့်နောက်ဆို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာ ဖြစ်လာမလားပဲ။ ဒီ systemကိုသူများနိုင်ငံမှာ လုပ်တာ ကြားဖူးနေတာ ကြာပါပြီ။ ကိုယ့်နိုင်မှာ ရှိစေချင်ခဲ့တာပါ။ အခုတော့ ၀မ်းလည်းသာ ၀မ်းလည်းနဲဖြစ်ရပါတယ်။ ၀မ်းသားတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ့်မြို့ကိုယ့်ရွာလေး သန့်ရှင်းကြမယ်။ ရောဂါကင်းကြမယ်ပေါ့။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သထက်မြင့်လာမယ် ဆိုတာကိုတွေးပြီးဝမ်းသာ တာပါ။ ၀မ်းနည်းတဲ့အချက်က အမှိုက်အိပ်ဝယ်ရင် ကုန်ကျမယ့် ငွေကို ဈေးဖိုးထဲက ဖဲ့သုံးရတော့မှာပါ။ အပို အကုန်ခံချင်ကြပါတော့မလား။ ဒီခေတ်ကြီးထဲ အသုံးစာရိတ်အလွန်များချိန်မှာ နေ့စဉ် ပိုက်ဆံကို လွှတ်ပစ်သလိုဖြစ်မနေဘူးလား။ နေ့စဉ် ပစ္စည်း ၀ယ်နေကြထဲမှ recycle bag တွေ ပြန်သုံးရင် မကောင်းဘူးလား။ ကိုယ့်ရွာကိုယ့်နိုင်ငံ အတွက် ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ကိုဝေဖန်ပေးစေလိုပါတယ်။ ဒီစာနဲ့အတူ သတင်းစာထဲက စာသားလေးပါတွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ရွာသူရွာသားများဝေဖန်ပေးစေလိုပါတယ်
အမှိုက်ထည့်ဖို့အိတ်တောင် ကာလာခွဲနေသေးတယ်..
အစို အခြောက်ခွဲတာ စည်ပင်တွေရဲ့အလုပ်ဂျ
ညညဆို အစိုတွေ..အခြောက်တွေ ပြန်ရောင်းရမဲ့ဟာတွေ ကားကြီးရပ်ပြီး ခွဲနေကြတာဂျီးကို
ဘာမှတိပဲနဲ့ဟာဗျဲဟာဗျဲ
ဟုတ်တယ်။အပိုကုန်ကျငွေတွေထွက်ရဦးမယ်။ ပလပ်စတစ်နဲ့လုံလုံခြုံခြုံထုတ်ပြီး ပစ်ရမယ်ဆိုရင်ပြီးတာဘဲ။ အခုတော့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ်ကို ၀ယ်ရဦးမယ်။ မမိုက်ဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျနော်ကတော့ ဈေးဝယ်ရင် ထည့် ပေးလိုက်တဲ့ အိပ် ကောင်းလည်း ကောင်းသေး
တယ် ကြီးလည်း ကြီးတယ် ဆိုရင် သိမ်းထားလိုက်တယ် နောက်အမှိုက် ပစ်ရင်သုံးလို့ ရတာပေါ့ ဒါပေမယ့်
အရောင်ခွဲသုံးပေးရမယ် ဆိုတာတော့ သုံးစွဲသူတွေ ဘက်က အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး ရေရှည် မှာ အလကား
နီးပါရတဲ့ အိတ်တောင် တခါတလေ အဆင်မပြေလို့ ဝယ်သုံးဖို့ ကတော့ ခတ်ပါတယ် ။အမှန် ကစည်ပင်က
သူတို့ တောင် အမှိုက်ယာဉ်ကို နေ့ စဉ်လိုက်မသိမ်းနိုင်ပါဘူး အခတ်အခဲတွေရှိလို့ကျနော်တို့ နားက ဈေးမှာ
ဆို အနံအသက်တွေမကောင်းတာ နေ့ စဉ်နေ့ တိုင်းပါဘဲ စည်ပင်က လာကို မသိမ်းနိုင်တာပါ ။ အဖွဲ့ အစည်း
တွေတောင်မှ အမှိုက်ကို နေ့ စဉ် အလျှင်မှီအောင် လိုက်မသိမ်းနိုင်ပါဘူး။ ဒါကို သုံးစွဲတဲ့ သူတွေကို စနစ်ရှိ
စေချင်နေပါတယ် အမှန်က ပြည်သူက စနစ်နဲ့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လိုက်နာမယ့်သူက များပါတယ်ဗျာ.စည်း
ကမ်းမရှိတဲ့ သူက နည်းပါတယ်။စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်မပစ်ရလို့ ရေးထားပြီး စည်းကမ်း တကျအမှိုက်ပစ်နိုင်
အောင် စီစဉ်ပေးရမှာပါ။ အခုတော့ စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်မပစ်ရလို့ ပြောပေမယ့် ပစ်စရာနေရာလည်း
သတ်မှတ်မပေးထားတော့ ပစ်ချင်သလို စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်ပစ်ကြတာ မဆန်းပါဘူး သတ်မှတ်အမှိုက်ပစ်
ရမယ့် နေရာတွေမှာက လည်း အမှိုက်သိမ်းယာဉ်က အချိန် မှီ လာမသိမ်းတာကြောင့် သတ်မှတ်ချိန်ကျော်
လည်း အမှိုက်တွေက ဆက်ရှိနေတဲ့ အတွက် ကြောင့် အမှိုက်ပစ်တဲ့သူတွေကလည်း သတ်မှတ်ချိန်ကျော်
တာတောင်အမှိုက်တွေ လာပစ်ရင်းနဲ့ သံသယာလည်နေတာပါဘဲ။ နောက်ဆုံး ခံရတာကတော့ အမှိုက်ပုံ
နား ကအိမ်ခြေတွေနဲ့ဖြတ်သွားဖြတ်လာ လုပ်တဲ့ သူတွေက အနံအသတ်ဆိုးတွေခံရတာပါဘဲ။ စည်ပင်
ကလည်း အမှိုက်သိမ်းမယ့်ရက် တွေဆို စီးပွားဖြစ် လာပြီး အမှိုက်ပုံဖွကြပါသေးတယ် ။ စည်ပင်ကား က
လည်း ဆီဖိုး ကျန်အောင် သတ်မှတ်ခေါက်ရည်ကိုလျှော့ ပြီး သိမ်းပါတယ် ။ တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ အမှီုက်
ထက်ပိုပြီး ပြည့်လျှံအောင်တင်တော့ လမ်းတလျှောက်မှာ အမှိုက်တွေ ပြုတ်ကျ ကျန်ခဲ့ ရပါတယ်။
အော် စိတ်ပါသွားတာ အမှိုက် အမှိုက် ကျနော်တို့ အိမ်ရှေ့ တည့်တည့် လမ်းဆုံမှာ အမှိုက်ပုံက တစ်ပတ်
တစ်ရက် ဟီးထနေအောင်တွေ့ နေရလို့ ပါ ဗျာ အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ ညနေဆို စည်ကားသိုက်မှိုက်
စွာ ဖြင့် ဟီးထနေသောကြောင့် စိတ်ပါလက်ပါ ရှည်လျှားစွား ရေးမိပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း
နိုင်ငံသန့်ရှင်းစေလိုရင် ခေတ်မှီတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့ လူတိုင်း သွားချင်ရင်
အကျင့်ပျက်ခြစား လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ၀န်ထမ်း အမှိုက်အိတ် တစ်အိတ်….
စီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ် အမှိုက်အိတ် တစ်အိတ်….
နိုင်ငံအတွက် များစွာသော ဆုံးရှုံးမှုများ ကြုံတွေ့ရမဲ့အမှိုက်တွေ ကို ခွဲ ပြီး
ပလပ်စတစ်အိတ် နဲ့ လုံလုံခြုံခြုံ ထုတ်ပြီး ပစ်ရမယ်။
ဘာအမှိုက်တွေ များ ရှိ လဲ..သိတော့ဝူး……
အမှိုက်ကိုစံနစ်တကျခွဲပြစ်တာကတော့ကောင်းပါတယ်။ အိတ်ဖိုးကုန်တယ်ဆိုရင် နဲတဲ့အမှိုက်ကိုပဲသတ်မှတ်တဲ့အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး ကျန်တဲအမှိုက်တွေကို ကြိုက်တဲ့အိတ်နဲ့ ထည့်ရင် အိတ်ဖိုးသက်သာမယ်ထင်တယ်။
အမှိုက်သိမ်းစံနစ်ကို.. ပုဂ္ဂလိက ကန်ထရိုက်ပေးလိုက်သင့်တယ်..။
အဲဒီမှာ.. ခွဲမပစ်ချင်တဲ့သူတွေကို.. ပုံးတခုထဲပဲစုထည့်ခိုင်းပြီး.. ပစ်ခိုင်းပေါ့….
အမှိုက်တွေ ပြန်ခွဲရတဲ့အတွက်.. အဲဒီလုပ်အားခဖိုးငွေကို..အမှိုက်ပစ်ခထဲ ထည့်ပေါင်းမယ်ပေါ့..
တကယ်တော့.. မြန်မာပြည်လိုနိုင်ငံက. အိမ်ထောင်စုတခုချင်း..လူတဦးချင်းလုပ်အားထည့်ပြီး.. ခွဲပစ်သင့်တာပေါ့…
စားသောက်တုန်းကတော့.. ငွေကုန်ခံနေ/ခံခဲ့ပြီး.. ထွက်လာတဲ့အညစ်အကျေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအတွက်.. ငွေမသုံးချင်လို့.. ဘယ်ဖြစ်မလဲလေ…။
သူကြီးရေ .. ရန်ကုန်မှာ အမှိုက်သ်ိမ်းတာ အများစုကတော့ ပုဂ္ဂလိက လက်ထဲရောက်နေပါပြီ ။ အရင်ကထက်စာရင် အများကြီး သန့်လာပါတယ် ။ လူတွေ စည်းကမ်းရှိရင် ပိုကောင်းလာမှာပါ။
နိုင်ငံတစ်ကာမှာ ခွဲပြီး ပစ်ပေးရတာ အိမ်ဖော်တွေ နဲ့ နေတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာသာ မလုပ်နိုင်ကြတာ ..
အရောင် ခွဲ ပစ်ရမယ်ဆို အိပ်ပေးတဲ့ စူပါမားကတ် တို့ . ဆိုင်တို့ က အဲ့ဒီ့နှစ်ရောင်ဘဲထုတ်ရင် အိတ်အသုံးပြန်တည့်တာနဲ့တင် ဈေးချင်းတူရင် သူ့ဆီဝယ်လိမ့်မယ် ထင်ကြောင်းပါ ..
အမှိုက်အိပ်ကို ကာလာခွဲတာ တစ်ခုတော့ရှိမယ်။ အမှိုက်သိမ်းတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ဒုက္ခမများအောင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ တလောကရေဒီယိုလိုင်း တစ်ခုမှာ အစိုအိပ်မှာ အခြောက်(ဥပမာ- ဖန်ကွဲစ သံတိုသံစ မီးချောင်း လို ရှတက်တဲ့ဟာတွေခိုးထည့်လို့ မေးခိုင်ပိုးဝင်ပြီး အသက်ဆုံးရတာတွေကို ပြောပြသွားဖူးတယ်။ ခွဲခွဲခြားခြားလုပ်ထားရင် သိမ်းဆည်းတဲ့သူအဆင်ပြေအောင်လို့ ရောဂါတွေ မ၀င်အောင်လို့လဲပါမယ်ထင်တယ်နော်။
သတင်းစာထဲမှာပြန်ပြီး ထင်မြင်ချက်ပေးထားတယ်လေ… အမှိုက်စိုပစ်ရန်ပုံး ၊ အမှိုက်ခြောက်ပစ်ရန်ပုံးဆိုပြီး အမှိုက်ပုံးတွေခွဲထားလိုက် ပြီးရောဟာ… အိမ်ရှင်မတွေ ဘာအိတ်နဲ့ပဲပစ်ပစ်ပေါ့…အဲဒါနဲ့ပဲ အမှိုက်အိတ်ဝယ်ရတာ ကြောက်တာနဲ့ အမှိုက်ပုံမသွားပဲ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကိုစွန့်ပစ်နေရင်တော့ပိုပြီးညစ်ပတ်တော့မှာပဲ… နောက်ဖေးလမ်းကြားမြောင်းမရှိတဲ့ရပ်ကွက်တွေ တော်တော်စိတ်ညစ်ရတာ…စည်းကမ်းမရှိတဲ့သူတွေက နောက်ဖေးကိုပဲအလွယ်ပစ်နေကြတာ။ အဲဒီလူတွေကို ကျပ်ကျပ်မတ်မတ်ဒဏ်ရိုက်ကမယ်။